महानायक त राजेश हमाल नै हुन् ।
हुन त म कलाकारिताको बारेमा धेरै कम लेख्छु । खासगरी आर्थिक पत्रकारिता र लेखन–विश्लेषण मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । तर, हिजोआज महानायक राजेश हमालले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई अबमुल्यन हुने थालेको देखेर दुख लाग्यो । कतिपय विचौलिया कमेडिएनहरुले नायक हमाललाई उछ्टिो काड्दै गोयबल्स हल्लाहरु गरेपछी केही लेख्नैपर्यो भन्ने लाग्यो ।
महानायक राजेश हमालका पुराना फिल्महरु त हलमै गएर हेर्न पाइएन । हमाल पुराना पुस्ताका तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रको जग नै बसालेका अब्बल कलाकार हुन् । मैले स्कुले विधार्थी छँदा ०५५–०५६ सालबाटै उनको फिल्महरु हेर्न थालेका हुँ हलहरुमा गएर । जतिवेलामा म नै १०–११ बर्ष हुँदै थिएँ । त्यतिबेला धेरैजसो हमालकै फिल्महरुले बजार पिटेका हुन्थे । उनको बुह–चर्चित ‘साथी’ फिल्म मैले पहिलोपल्ट हेरेको फिल्म हो । त्यसपछी पनि मैले ‘साथी’ दोहोयाएर नै हेरेकोे छु । त्यसैगरी उनका गाउँले, बसन्ती, हामी तिन भाइ, भरिया, पाले दाइ, मजदुर लगायत धेरै फिल्म मैले पनि हेरेको छु । हमालले हरेक फिल्ममा न्यायको पक्षमा, भातृत्वको पक्षमा, गरिव तथा मजदुरको पक्षमा, सामाजिक सद्भाव र एकताको पक्षमा एक्लै शतिसाल झै उभिएको भुमिका निभाएका हुन्थे् । अग्लो कदका, त्यो जमानाको रहर लाग्दा कपालधारी, वलिष्ठ एवं कसिलो मिलेको ज्यान भएका, शिक्षित, हयाण्ड्शम एवं दमदार आवाजका धनी हमालमा नायकमा हुनुपर्ने तमाम गुणहरु छन् । भलै स्वीकार्नु पर्छ उनी त्यति नाच्न जान्दैनन् । उनको कमजोरी त्यति मात्रै हो ।
अत्यन्तै मृदुभाषी एवं अनुशासनको कसीमा रहन रुचाउने राजेश हमालकै धेरैजसो फिल्महरु हरेर मैले आफनो विधार्थीवय विताएको हुँ । ती सम्झनाहरु सबै ताजा छन् । तर आज उमेर वा धेरै फिल्महरु गरिसकेपछीको थकानले महानायक राजेश हमाल २–४ बर्ष यतादेखि निक्रिय जस्तो हुदैगर्दा कतिपय प्रवृत्तिहरुले उनीमाथी हमला गरेका छन् । तिनले उनलाई महानायक होइनन भन्न भ्याएका छन् । कतिपयले त भुवन केसी महानायक भन्न भ्याएका छन् । आफनो अभिनयकालमा बजारमा दुइ दशकसम्म एकछत्र राज गरेका राजेश हमालसँग भुवन मात्रै होइन् कसैको पनि तुलना हुदैन । भलै भुवन केसी पनि राम्रा कलाकार होलान् । मैले पनि एक दुइ वटा भुवनको फिल्म हेरेको छु । तर भुवनको फिल्मले मलाई कहिल्यै आर्कषण गरेन् । बरु बत्र्तमानको कुरा गर्दा राजेशकै जस्तो भुमिका र दमदार अभिनयमा पल शाहलाई म पाउँछु । आफनै जेनेरेशेनको भएर पनि होला उनको अभिनय र भुमिकाहरु राम्रो पाउँछु । यद्यपी पल शाहको पनि राजेश हमालको जस्तो मिलेको शरिर अझै होइन । तैपनि बत्र्तमानमा पल शाह नै सबैका रोजाइका हिरो हुन् जस्तो लाग्छ ।
राजेश हमाल एक जमानामा धेरैका लागि हिरो थिए । अहिले पनि उनी सबैले सम्मान गर्ने पात्र हुन् । कलाकारितामा उनको भुमिका निरन्तर खाँचो छ । नेपाली समाजको विकृति, विसंगति माथी नायक हमालले कलाकारिताको माध्यमबाट धेरै हदसम्म चिर्ने प्रयास गरेका हुन् । निश्चय नै कुनैपनि समाजको प्रगती, उन्नती र उन्नयनको लागि एउटा कलाकारले लगाएको गुन विर्सन मिल्दैन । नायक हमाले नेपाली समाजलाई धेरै नै गुन लगाएका छन् । त्यो स्वीकार्नु पर्छ । उनले कलाकारितामै लागेर आफनो पुरापुर जिन्दगी सर्मपण गरेका छन् । कलाकारितालाई भविष्य नठान्ने त्यो समयमा उनले यही पेसाको जग बसाल्न पुरा परिवारसँग विद्रोह गरे । शिक्षित परिवारका सदस्य उनी पढाइमा पनि उत्तिकै दक्ष थिए । देश तथा विदेशमा उनले अध्ययन गरेका थिए । कलाकारिता क्षेत्रले त्यो जमानामा त्यत्तिको त्यागी र शिक्षित ब्यक्ति पाउनु गर्वकै विषय थियो । आजका मितिमा त पढेका मान्छेहरु अझै खुरेर कलाकारितमा आउन सकेका देखिदैनन् भने त्यो जमानामा उनले गरेको त्याग लरतरो कहाँ थियो र? । उनले धेर्रै फिल्महरुमा काम गरे । नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन, बजार क्रियाशिल गर्न र नयाँ आएका निर्देशकहरुलाइ पनि किन निराश बनाउनु भनेर पनि कतिपय फिल्महरुमा उनले काम गरे । आज कतिपय कथावस्तु गतिला नभएपनि सहानुभुती देखाएर हमालले खेलेका फिल्महरु सबै अब्बल भएनन् भनिएका छन् । त्यो उनको उदारता हो ।
राजेश हमाल महानायक हुन र ? भनेर एक जना हास्य कलाकारले जो टिपणी गरिन् । त्यसपछी यतिवेला महानायक हमालका फ्यानहरु अचाक्ली रिसाएका छन् । कतिपय कलाकारिता क्षेत्रभित्रैबाट उनको रिस गर्नेहरुले मौका छोपेर महानायकबारे बहस चलाएका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा त्यत्रो योगदान दिएका महान कलाकार जसले सदैब देशभक्ति देखाएका छन् उनै विरुद हमला भएको देखिन्छ । सारा चलचित्रप्रेमीहरुले महानायक नै भनेर सम्मान दिएका राजेश हमाल महानायक हुन् वा होइनन् भनेर केही मान्छेहरुले अहिले आएर बहस चलाएका छन् । चलचित्र क्षेत्रकै उनका कतिपय समकालिन वा कतिपय निर्देशकहरुले भनेर मात्रै राजेश हमाल महानायक हुने नत्र नहुने हो र ? जुन हास्यकलाकारले महानायक हमालमाथी हमला गरिन् तिनैकन्र्तवार्ता भिडियो र त्यसपछी युटुब, फेसबुक, अनलाइनहरु लगायतमा आएका सामाग्रीमाथी आएका प्रतिक्रिया मात्रै कसैले हेर्यो भने पनि दोहोर्याएर महानायक को हो भनेर कसैले भन्दैन । सबैले राजेश नै हुन् भन्छन् नै ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा लाखौ नेपालीहरुले राजेश हमाल नै महानायक हुन् भनेर प्रतिकृया जनाएका छन् । त्यही प्रतिक्रिया र फ्यान फलोअरहरुको जवाफ नै काफी छ राजेश महानायक नै हुन् । प्रतिक्रिया जनाउने ९५ प्रतिशत मान्छेहरुले नै महानायक राजेश हमाल नै हुन् भनिसकेपछी उनलाई अरु कसले महानायकको पगरी गुथाउनु पर्ला ? कुनै अमुक निर्देशक, कलाकार वा पत्रकारले महानायक भनेर हमाल महानायक हुने होइन्न । नायक हमाललाई त सारा नेपालीले महानायक भनिदिएका हुन् । उनको योगदानलाई कदर गरेर उनलाई त्यो सम्मान वा उपमा दिएका हुन् ।
खासगरी नेपाली सिनेमा उद्योगको जग बसाउन महत्वपूर्ण योगदान राखेका हमालको समकालिनहरु उनी भन्दा निकै कमजोर हुन् अभिनयमा । त्यही भएर त त्यो बेला सबैले उनैलाई खोज्थे । फेरी उनी जत्तिको अनुशाशित, दयावान, शिक्षित, अभिनयमा पोख्त, विदेशी कलाकारहरुसँग पनि सम्बन्ध राख्न सक्ने र उनले जति सिने क्षेत्रमा लगातार समय विताएका अरु नायकहरु छैनन् । कतिपय उनका वरपर आउन खोज्ने भनिएकाहरु क्यारेक्टरलेश एवं अनुशासनहीन सावित भएका छन् । के नेपाली फिल्म उद्योगले त्यस्ता अनुशासनहीनलाई महानायक भन्छ त ? असम्भव एवं लज्जास्पद कुरा हो त्यो । त्यसकारण महानायक राजेश हमाल नेपाली सिने जगतका गर्भ गर्न लायक पात्र हुन् । कुनै विवादमा नपरेका र नेपाली सिने जगतलाई माथी उठाउन निकै मिहिनत गरेका महानायक हमाल विरुद्ध विष बमन गर्नु नेपाली कलाकारिता जगतकै लागि लज्जाको विषय हो ।
प्रकासित मिति २०७७–३–२४
पृथक अभिनयमा पोख्त कलाकार सुबेदी लकडाउनपछी सोसल…